चित्तबुझदो अवस्था नभए एकता नै नहुने : रायमाझी » खबरहरुको एउटै केन्द्र
चित्तबुझदो अवस्था नभए एकता नै नहुने : रायमाझी
मंगलवार, चैत्र १३, २०७४ १८:०८ मा प्रकाशित !
२०७४ चैत १३ मंगलबार
माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता तथा पुर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले एकतामा चित्तबुझदो अवस्था नभए एकता नै नहुने बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एकताका लागि ‘फिप्टी–फिप्टी’ भाग चाहिने बताएको भोलिपल्टै रायमाझीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
प्रदेश नं ५ मा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सम्मानजनक अवस्था नभए एमाले र माओवादी एकता नहुने दाबी गरे । औकातअनुसार सम्मानजनक स्थान चाहिने उनको भनाई थियो । पार्टी एकता कहिले हुन्छ त भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा नेता रायमाझीले त्यसको घडीपला हेरेर आफू नबसेको रुखो जवाफ फर्काए ।
रायमाझीको अभिव्यक्तिले एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियामा रहश्यमयी मोड आएको सङ्केत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल हुने बताउँदै रायमाझीले ईयुले बुझाएको चुनावी प्रतिवेदनको आलोचना गरे । नेपालको आन्तरिक मामलामा इयूले अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्नु गलत भएको तर्क उनले गरे ।
प्रदेशको राजधानी सबैले आफ्नो ठाउँमा माग्नु स्वभाविक भन्दै उनले तर माग्दैमा राजधानी नपाइने बताए । कार्यक्रममा भारतका लागि नेपाली पुर्वराजदुत दिपकुमार उपाध्याय, राष्ट्रियसभाका सदस्य खिमलाल भट्टराईले राजनीतिक अवस्था र प्रतिपक्षको भुमिका बारे बोलेका थिए ।
PREVIOUS POST Previous post: अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई भन्यो : चन्द्रागिरि केवलकार नचढ्नु
NEXT POST Next post: आइपीएलको उद्घाटन समारोहमा बलिउडका स्टार अभिनेताहरुले आफ्नो कलाको प्रस्तुत गर्ने
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, चैत्र १३, २०७४ १८:०८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, चैत्र १३, २०७४ १८:०८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, चैत्र १३, २०७४ १८:०८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, चैत्र १३, २०७४ १८:०८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, चैत्र १३, २०७४ १८:०८